June Intake Online English Courses
၂၁ရာစုကြီးမှာ မရှိမဖြစ် မသိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ e-learning နဲ့ သင့်ရဲ့ English language skill ကျွမ်းကျင်စေဖို့
Hysan ရဲ့ Online English courses များရောက်ရှိလို့လာပါပြီး…
ခက်ခက်ခဲခဲလေ့လာနေမယ့်အစား Hysan ရဲ့ unique teaching methods နဲ့ learning experienceကို ရယူပြီး
သင့်ရဲ့ English Language skill ထိထိရောက်ရောက်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တက်မြောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေး…
နိုင်ငံတကာမှသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရင့် ဆရာ ဆရာမများကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး 100% student’s success guarantee ပေးတဲ့သင်တန်းမျိုး
🏆 အင်္ဂလိပ်စာကို Advanced level ထိရောက်အောက်လေ့လာလိုသူများအတွက်…
🏆 IELTS ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်လိုသူများအတွက်
🏆 လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းတိုးတက်လိုသူများအတွက်
🍀 Booster : Pre-intermediate Level4Skills Certificate Course
🍀 Accelerate : Intensive Speaking and Listening Course with Native English Trainer
🍀 Milestone :4Skills + IELTS Foundation (Intermediate and Above Certificate Course)
🍀 Certificate Course in IELTS Preparation : Standard Course
🍀 Elevate : Certificate Course in Professional English
မိတ်ဆွေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး online learning experience ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက် online learning နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ survey ကို ၁၀ မိနစ်လောက် အချိန်ယူဖြေကြားပေးပြီး 50% Discount ရယူလိုက်ပါခဗျ📲
အောက်ပါ link မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရမှာပါ။ Burmese, English ဘာသာနှစ်မျိုးလုံးအတွက် link နှစ်ခုပေးထားပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားနဲ့ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
English - bit.ly/hysanonlinelearningsurvey Myanmar - bit.ly/hysanonlinelearningmyanmar
𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝟒 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 - 𝐏𝐫𝐞-𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞
အဂ်လိပ်စာ4Skills ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက်
👩‍🎓 နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရင့် ဆရာမကိုယ်တိုင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမယ့်အတန်း.....
➡️ မိမိမှာ အင်္ဂလိပ်စာ elementary level ရှိထားတယ် ဒါမှမဟုတ်လည်း မိမိက အင်္ဂလိပ်စာ4Skills ကို အခုမှစလေ့လာမယ် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာလည်း ထိထိရောက်ရောက်ပြောတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတန်းကသင့်အတွက်ပါ။
➡️ Booster အတန်းကတော့ နာမည်က booster ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကို Boost လုပ်လိုက်သလို ထိရောက်စေမယ့်အတန်းမျိုးပါ။
➡️ အတန်းထဲမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊ အသံထွက်၊ နားထောင်၊ အရေးအဖတ် စွမ်းရည်တို့ကို အဓိက လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
𝐀𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
Native English Teacherကိုယ်တိုင်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမယ့်Speaking နဲ့Listening သီးသန့်
📌 ယေဘုယျအားဖြင့် Reading & Writing ထက် Speaking & Listening ကို နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပိုပြီး လက်တွေ့ကျကျ သုံးကြရတာပါ။
🏆ပြေပြစ်ပြီး သပ်ရပ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ဝေါဟာရတွေကို နေရာတကျ ဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရောက်အောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ထိထိမိမိပြောရမလဲ စတာတွေကို လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါ။
📌𝙉𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙎𝙥𝙚𝙖𝙠𝙚𝙧 တစ်ဦးရဲ့ လေယူလေသိမ်းကို လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာနိုင်မယ့်အပြင် နားထောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်လာဖို့ လိုအပ်တဲ့ အသံဖိုင်တွေနဲ့ စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် လေ့ကျင့်ပေးသွားဦးမှာပါ။
𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 : 𝟒 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 + 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐛𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞)
မိမိရဲ့ General4Skills ကို အဆင့်မြှင့်ပေးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ IELTS ကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့2in 1 အတန်းလေးပါ။🎈
📌 Milestone (Flagship Course) အတန်းကတော့ English level ကို Pre-intermediate Level အထိပြီးထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုမိုကျွမ်းကျင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်အောင် General English4Skills ကိုလည်း မြှင့်တင်သင်ကြားပေး ပြီးတော့ IELTS စစ်ဆေးပုံ၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုပုံ နည်းစနစ်တွေနဲ့ အသွားအလာတွေကိုလည်း ပိုမိုရင်းနှီးလာအောင် ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ပေးမယ့် သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
📌 ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်တော့ General English ကို 80% အနေနဲ့ အသားပေးပြီးတော့ IELTS ကိုတော့ 20% အတိုင်းအတာထိရောက်အောင် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ IELTS ရော General4skills ရောကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်လိုတဲ့ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအတွက် သင့်တော်တဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။
𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞
🤗 Course အားလုံးကို Foreign English Teacher မှ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ English4skills ကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး ရုံတင်မက၊ စာမေးပွဲမှာ အချိန်တိုတိုအတွင်း အမှတ်များများ ရအောင် ဖြေဆိုနိုင်မယ့် Test strategies များကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲမှာ band score ကောင်းကောင်း ရစေဖို့အတွက်လည်း အတန်းထဲမှာ နိုင်ငံတကာမှ အတွေ့အကြုံရှိ IELTS Trainer မှ ကိုယ်တိုင် အစမ်းစာမေးပွဲများကို အကြိမ်ကြိမ် စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
𝐄𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐞: 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်က Professional ကျကျပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ နဲ့ အလုပ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာ ပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့ CV/Resume, letter, email, interview တွေလုပ်နိုင်ဖို့ Hysan ရဲ့ Elevate online class ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ…
- Learn and practice the vocabularies related to business contexts. - Learn how to communicate in English effectively and independently in day to day workplace scenarios. - Learn how to write constructive proposal, report, email and letters, essential written communication - Learn how to converse and discuss withinameeting or for decision-making process - Learn and practice the soft skill, such as public speaking and giving presentation, which can advance work performance
အခုလက်ရှိ မိမိရဲ့ Englishစာ levelကို သေသေချာချာမသိထားသေးဘူးရင်တော့
- bit.ly/hysantest မှာ placement test ဖြေထားနိုင်ပါတယ်...။
သင့်ရဲ့ level အပေါ်မူတည်ပြီး သင်တိုးတက်ချင်တဲ့အပိုင်းထိ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့လေ့လာနိုင်အောင် Hysan က ‌student consultant က သင့်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Details	- class time and course fees
Register at - bit.ly/hysanclasses